Nagarik News - No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Nepal, राष्ट्रिय दैनिक - अल्जाइमर्स: संगीत र सुस्त मृत्यु
बिहिबार, ०५ भदौ २०७६, ०२ : १३
अल्जाइमर्स: संगीत र सुस्त मृत्यु
शनिबार, २० माघ २०७४, १७ : २७ | नागरिक
संगीतमा ईश्वरीय शक्ति हुन्छ । संगीत दिलबाट बजाउनु वा गाउनु भयो भने मुर्दा पनि ब्युँतन्छ भन्ने भनाइ छ । शास्त्रीय संगीतका प्रख्यात गायक तथा वादक तानसेनले गाउँदा झरी पथ्र्यो र दियो बल्थ्यो भन्ने भनाइ छ ।यी भए शास्त्र र इतिहासका कुरा तर पछिल्लो समय वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने संगीतले अल्जाइमरजस्तो रोगको उपचार पनि हुन सक्छ ।
अल्जाइमर एक किसिमको बिर्सने रोग हो । यस रोगमा केही सम्झना दिलमा गढेर बसेको हुन्छ र त्यही सम्झनाका आधारमा अल्जाइमरका रोगीले नजिकका प्यारा मानिसलाई चिन्ने गर्छन् तर उनीहरुलाई नयाँ कुरा कहिले स्मरण हुन्छ कहिले हुँदैन । पुराना स्मरण पनि टुक्रा टुक्रामा बस्ने गरेको हुन्छ ।
अखिलेशलाई ५० वर्षको उमेरमा बिर्सने रोगको सुरुवात भएको थियो । सुरुमा यो त्यति चिन्ताजनक होलाजस्तो न त अखिलेशलाई लागेको थियो न त उनको परिवारजनलाई नै । ७० वर्षको उमेर पुगुञ्जेल त अल्जाइमरले अखिलेशको दिमागलाई दपेटिहाल्यो । बिस्तारै उनले शब्द नै बिर्सन थाले । हुँदाहुँदा घरमा बोलिने बोलीचाली र भाषा नै बिर्सन थाले ।
अखिलेशलाई अझै पनि जीवनका केही कुरा सम्झना छन् तर संगीतका प्रति उनको लगावमा कमी भने आएको छैन । ७० को दशकमा उनी बडो रुचिका साथ फिल्म हेर्न थान्थे । शास्त्रीय संगीतमा उनको गज्जबको लगाव थियो । उनी घरमा हुँदा पनि चर्को आवाजमा संगीत सुन्थे ।
हिजोआज उनको बोल्ने शैली निकै सुस्त भइसकेको छ । उनको बुद्धिले शब्द बनाउन छाडेको छ । तथापि उनलाई पुराना हिन्दी गीत र शास्त्रीय संगीत अझै पनि स्मरणमा छ ।
विगत दुई वर्षयता उनले म्युजिक थेरापीका माध्यमले संगीतका नयाँ शैली र शिल्प सिकिसकेका छन् । उनी वीणामा नयाँ नयाँ धुन बजाइरहेका हुन्छन् । दिनमा कैयौँ पटक आफूलाई याद भएका गीतका गेडा उकेरिरहेका हुन्छन् ।
उनको स्मरणमा संगीत मात्र ज्यूँदो छ । त्यसैले त उनी कतिपय अवस्थामा घरमा रमाइलो वातावरण छ भने गाउन थालिहाल्छन् । कहिले सुरमा गाउँछन् त कहिले बेसुरमा ।
दिमागले काम गर्ने तरिकाको जुन गणित हुन्छ, त्यो बुझ्नका लागि संगीत पनि वैज्ञानिकहरुका लागि एउटा अहं शोधको विषय बनेको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार संगीतमा यति शक्ति हुन्छ कि दिमागले सबै न्युरोन्सलाई सक्रिय बनाइदिन्छ । त्यसैले संगीत सुनेर मानिस झुम्न, हल्लिन र गोडालाई चलाउन थालिहाल्छ ।
अल्जाइमर तथा डिमेन्सियाजस्ता रोगको कुनै खास कारण अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन । यो रोग कुनै स्वस्थ मानिसलाई अचानक नै पनि हुन सक्छ ।
संसारभर ४४ करोडभन्दा बढी यस रोगबाट पीडित छन् । एउटा अध्ययनअनुसार प्रत्येक चार जनामध्ये एक जनालाई यो रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । बेलायतमा मात्र ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस यस रोगको सिकार छन् । हुन त अधिकांश मानिस वृद्धावस्थाको अन्तिमतिर यस किसिमको रोगको सिकार हुने गर्छन् तर पछिल्लो समय ४०–५० वर्षको उमेरका मानिसमा पनि यो रोगको लक्षण देखिन थालेको छ ।
हालै मात्र अल्जाइमरको विकसित रुपबाट पीडित ९१ वर्षीया एक महिलामाथि शोध गरिएको थियो । ती महिलाको नाउँ नोर्मा थियो । उनलाई आफ्नो जीवनका कुनै पनि याद ताजा थिएनन् । न त उनी कसैलाई चिन्थिन् । तर उनलाई संगीतले भने तान्थ्यो । उनी संगीतको नयाँ धुन सिक्न इच्छुक थिइन् । संगीतले नै उनलाई सबैभन्दा बढी खुसी दिन्थ्यो ।
जानकारहरुका अनुसार डिमेन्सियाका रोगी आफ्नो उम्दा र रमाइला पलका बेला सुनेका गीत र धुन स्मरण गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई ती दिन याद आउनेबित्तिकै ती गीत र धुन गुन्गुनाउन थालिहाल्छन् ।
९१ वर्षकी नोर्माका लागि नयाँ धुन सिक्नु उति सहज थिएन तर पनि उनी नयाँ धुन मात्र सिकिरहेकी थिइनन् त्यसलाई स्मरण पनि गरिरहेकी हुन्थिन् । उनलाई दैनिकी चलाउनका लागि कतिपय शब्द याद आउँदैन थिए तर उनले आफ्नो जमानाका गीतका शब्द भने पूर्ण रुपमा सम्झने गर्थिन् ।
उनको दिमागमा संगीतका लागि एउटा विशेष ठाउँ थियो ।
यस किसिमको केस स्टडीका आधारमा नै जानकारहरु के भनिरहेका छन् भने डिमेन्सियाका रोगीहरुलाई संगीतको सहयोगले नयाँ किसिमका सिल्प सिकाउन सकिन्छ । उनीहरुमा बढ्दो तनावलाई संगीतबाटै कम गर्न सकिन्छ ।
अर्थात् संगीत यादगार मात्र हुँदैन बरु यो त स्मरण फर्काउने कुरामा पनि सहयोगी साबित हुन सक्छ ।
अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने रोगमध्ये अल्जाइमर्स छैटौँ नम्बरमा पर्छ ।
सन् २०१७ मा अल्जाइमर्स र अन्य डिमेन्सिया उपचारका लागि अमेरिकाले २५९ बिलियन डलर खर्च ग¥यो । २०५० सम्म यो खर्च १.१ ट्रिलियन पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
५० लाखभन्दा बढी अमेरिकीहरु हाल यस रोगबाट पीडित छन् । २०५० सम्म यो संख्या बढेर १ करोड ६० पुग्ने आँकलन छ ।प्रत्येक ६६ सेकेन्डमा अमेरिकामा एक जना यस रोगबाट पीडित हुन्छन् ।
अल्जाइमर्स तथा डिमेन्सिया रोगबाट पीडित वृद्धवृद्धाहरुको स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ३५% ले आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण रुपमा बिग्रिएको गुनासो गर्छन् जबकि अन्य वृद्धवृद्धाहरुको सेवामा रहेका १९% ले मात्र यस्तो गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
प्रत्येक तीन जनामध्ये एक जना वृद्धवृद्धा डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्सबाट मृत्यु बेहोर्ने गरेका छन् ।
डिमेन्सियाबाट जति मानिस मर्छन्, त्यति त स्तन तथा प्रोस्टेट क्यान्सरको कुल मृत्युभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
सन् २००० यता अमेरिकामा मुटुको रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या १४% ले घटेको छ भने अल्जाइमर्सबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८९% ले बढेको छ ।
१ करोड ५० लाख भन्दा बढी अमेरिकीहरु डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्स रोगका लागि अतिरिक्त रकम तिर्न नसकेको तथ्यांक छ ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्यकर्मीहरुले यस्ता रोगीको सेवामा १८.२ बिलियन घण्टा बिताएका थिए, जसको केयर भ्यालु २३० बिलियन डलर हुने गर्छ ।
नेपालमा पनि डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्सका रोगीहरुको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो रोग कति घातक छ भन्ने कुरा यही तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ ।
बंगलादेशी राजदूत सम्मानित
जनताले भने झैं भा'को छैन है ...(भिडियो)
भिडियोमा नेपथ्यको ‘नासै छ्याँबा’
विगत सम्झँदै आभासले गुञ्जाए पलेँटी
डेउडामा झुम्यो काठमाडौं
काठमाडौंमै राँगाेको आक्रमण, एकको मृत्यु
बम विस्फाेटमा परी घाइते मध्ये एककाे मृत्यु
बंगलादेशको ढाकामा आगलागि हुँदा ६९ को मृत्यु
मिक्सरले थिच्दा ठेकेदारको मृत्यु
एक मजदुरको मृत्यु
भारतमा मदिरा सेवनबाट ६० भन्दा बढीको मृत्यु
सिन्धुलीमा बोलेरो दुर्घट्ना, पाँचको मृत्यु, आठ जना घाइते
घरमा कोही नभएको बेला बन्दुक पड्काउँदा मृत्यु
घर भत्किदा वृद्धको मृत्यु
गरिब देशमा क्यान्सरबाट धेरैको मृत्यु
रड खस्दा वडा सदस्यको मृत्यु
चिकित्सकको लापरवाहीले बालकको मृत्यु, अस्पतालमा तोडफोड, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
गुल्मीमा जीप दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
मोटरसाईल दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु
बिहारमा रेल दुर्घटना, ६ काे मृत्यु, दर्जनाैँ घाइते
जिप दुर्घटनामा १ काे मृत्यु २ घाइते
डाक्टरको ‘लापरबाही’ ले शिशुको मृत्यु
चट्याङ लागेर १ जनाको मृत्यु, दुई घाइते
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय कारागारमा १३ कैदीबन्दीको मृत्यु
इँटाभट्टाको गारो भत्कँदा भाइबहिनीको मृत्यु
केन्याको एक होटलमा आक्रमण, १५ जनाको मृत्यु
जब मृत्यु नाच्यो
रुपन्देहीमा तस्कर र प्रहरीबीच भिडन्त, एककाे मृत्यु
चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटना, पैदाल यात्रीसहित दुईको मृत्यु
मृत्युको पहिलो कारण सुतेको सुत्यै
'पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर…' गीतमा सुनिएको समाज
ट्याक्टर दुर्घटनामा १ काे मृत्यु
आप्रवासी बालबालिकाको अमेरिकी हिरासतमा मृत्यु
मृत्यु रोकेको धनदेवीको त्यो डाँको...
ट्रिपरको ठक्करबाट एककाे मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
जाडोले दुई जनाको मृत्यु
ट्याक्टर दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ६ घाइते
घरमा आगलागी हुँदा ३ बालबालिकाको मृत्यु
पाल्पा जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या पाँच पुग्यो
चितवनमा हात्तीको आक्रमण, दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौंमा उस्ताद जाकिर हुसेनको सांगीतिक कार्यक्रम
कर्नाटक बस दुर्घटनामा २८काे मृत्यु
किराँतेश्वरमा धाधि धिं धा
कराँचीस्थित चिनियाँ महाबाणिज्य दूतावासमा आक्रमण, पाँच जनाको मृत्यु
बसकाे ठक्करले एक पैदल यात्रीको मृत्यु
क्यालिफोर्निया डढेलोमा मृतकको संख्या ७७ पुग्यो
पानी ट्यांकरको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु
जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, १३ घाइते
छानोबाट खसेर मजदुरको मृत्यु
दुध दुहुन खोज्दा भैंसीले हानेर ज्यान गयो
कर्णलीमा डुवेर अष्ट्रेलियन नागरिकको मृत्यु
सडक दुर्घटनामा नेमकिपाकी नेतृ शाहीको मृत्यु, पति गम्भिर घाइते
एल्बमको सिक्वेल ,व्यर्थको रहर !
ट्रयाक्टरले किचेर बालिकाको मृत्यु
पाल्पामा जीप दुर्घटना, एकको मृत्यु ७ जना घाइते
ट्रयाक्टरबाट खसेर वडा सदस्यको ज्यान गयो
नातिको कुटाइले हजुरबुबाको मृत्यु
चोरीका काठ ओसार्दा च्यापिएर मृत्यु
टिपर पल्टदा दुईको मृत्यु
अन्र्तराष्टिय हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भए क्षतिपूर्ति १ करोड ८५ लाख
श्रेष्ठको मृत्युको दोषी सरकार
खुलै छाडिएको सडक ढलमा खसेर एक जनाको ज्यान गयो
दोलखामा एउटा घरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु
स्कुटर र जीप ठोक्किदा श्रीमतीकाे मृत्यु, श्रीमान घाइते
गुल्मीमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
लडेर २ को मृत्यु
सवारी दुर्घटनमा देशभर ७ जनाको मृत्यु
छुट्टा छुट्टै घटनामा दुई जनाको मृत्यु
तनहुँमा बसको ठक्करले मृत्यु
सावधान! ढिस्कोमा परिएला
दुई शिशुको मृत्यु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्यो
ढुङ्गा खसेर युवतीको मृत्यु
ट्रकमा मोरटसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
ढिस्कोले पुरिएर एकै घरका तीन जनाको मृत्यु
भीरबाट खसेर बालिकाको मृत्यु
सर्पले डस्दा दिदी भाईसहित ३ को मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
अमेरिकामा गोली लागि एक नेपालीको मृत्यु, एक घाइते
ट्रिपरकाे ठक्करले बालकको मृत्यु
उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न माग
त्रिशूलीबाट बालुवा झिक्ने क्रममा डुबेर मजदुरको मृत्यु
बस दुर्घटनामा एककाे मृत्यु
कमलाले खोस्यो महतो परिवारको खुसी